असोज २६, २०७५ | समीक्षा
पहिले पहिले हामीले कविता लेख्न आरम्भ गर्दा भाषा, शिल्प र शैलीका कुरा गथ्र्यौं । अहिले के लेख्ने र कस्तो लेख्ने भन्ने कुरा उठ्ने गरेको छ । विषय वस्तुको कुरा उठ्ने गरेको छ । मेरो दृष्टिमा कविता के र कस्तो दुबै हुनु पर्दछ । के उसको आधरा हो र कस्तो उसको शिल्प हो । अनि मात्र कविता हुन्छ । म अक्सर कविताको परिभाषा दिँदा भन्ने गर्छु कविता ढुकुर जस्तो हो । उ जमिनमा बस्छ, आकाशमा उढ्छ । उढ्नु उसको शिल्प हो, जमिन उसको विचार हो । त्यसैले के मात्र पनि हुँदैन कवित । कस्तो मात्रले पनि हुँदैन कविता । यी दुबैको फ्युजन हो कविता ।
थेबाको संग्रहमा ४२ वटा कविताहरु छन् । एउटा एउटा कविता कस्ता छन् ? भन्ने कुरा त पाठक आफैंले पढेर अनुभव गर्ने कुरा हो । यहाँ मैले थेबाका कविताहरु पढे पछि समग्रमा मलाई लागेको कुरा राख्न चाहन्छु ।
मुक्तान थेबाका कविताका प्रवृत्तिहरु के हुन् त ? थेबामा कविता पढ्दाखेरि अनुभूत हुने पहिलो कुरा यहाँ संरचनात्मक विभेद छ, संस्थागत विभेद छ भन्ने लाग्यो मलाई । सामाजिक विभेद छ, न्यायलयमा विभेद छ, प्रशरीमा विभेद छ, राज्यका निकायहरुमा विभेद छ । जताततै विभदै विभेद छ । त्यही विभेद माथिको चुनौति, प्रहार र आक्रमण हो, थेबाको कविताहरु ।
दोस्रो, नेपाली कविता अहिलेसम्म एकल भाषा र संस्कृतिको सिन्डिकेडबाट मुक्तान थेबाको हातमा आएको छ । थेबाको कविता भाषिक सिन्डिकेड तोड्ने कविता हो । एउटा निश्चित जाति, नश्ल, संस्था, र प्राज्ञिक परम्पराको हातमा थियो, नेपाली कविता । बल्ल बल्ल त्यो सिन्डिकेट तोडेर थेबाको हातमा आएको छ, नेपाली कविता ।
म कविताको राम्रो पाठक, विद्यार्थी भएको नाताले म कविताको भाषा हेर्ने गर्छु । कविता पढ्दाखेरि भाषाले कतिको तान्छ ? मुक्तान थेबाको कविताको भाषा हेर्ने हो भने अनौठो लाग्छ तपाईंलाई । बेग्लै भाषामा लेखिएको छ उनले यो कविता । सबै कवितामा अत्यन्तै नयाँ र नौलो भाषा छ । कवितामा स्थान विशेष र पात्रहरुको सयौं नाम तामाङ भाषामा आएका छन् । पढ्दै अर्ग्यानिक लाग्ने तामाङ मिथहरु आएका छन् । यो भाषिक सिन्डिकेड तोङ्ने प्रयास हो । मुक्तान थेबाको कवितामा यो प्रवल रुपमा आएको छ ।
हामी अहिलेसम्म रामायण, महाभारत र हिन्दूशास्त्रका मिथहरुमा बाँचेका थियौं । त्यसलाई चुनौति दिने कार्य भएको छ । अब रह्यो कविता नयाँ चाँही कसरी हुन्छ त ? नेपाल बहुभाषि, बहुजाति भनेर संविधानले नै स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल भित्रका आन्तरिक राष्ट्रहरु जसका आ–आफ्नै भाषा, संस्कृतिहरु छन् । त्यसैले आन्तरिक राष्ट्रका एथ्निक भाषाहरुलाई प्रयोग गर्यो भने सायद नयाँ कविता हुन्छ । थेबाले त्यही गरेको छ । थेबाले आफ्नो कवितामा तामाङ शब्दहरु आबा, डोल्मा, पेङदोर्जे, ग्याल्सारि दोर्जे, म्हेमे .. धेरै प्रयोग गरेका छन् । थेबाको कविताले नेपाली कवितामा, साहित्यमा नयाँ भाषा भित्र्याएको छ । यसलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ ।
कवितामा टड्कारो रुपले भेटिएको अर्को बुँदा भनेको इतिहासलाई पुर्नलेखन गर्ने आग्रह हो । इतिहासका कालखण्डहरुमा हाम्रा पूर्खा यस्ता थिए, उस्ता थिए, राज्यले तामाङहरुलाई पिपा बनाइए भन्ने कुरा छ । राज्यसत्ताले यसरी तामाङहरुलाई दमन गर्यो, अहिलेसम्म दमन गरिराखेको छ भन्ने ढङ्गबाट कविता लेख्दा यहाँ जातिवादी आरोप लाग्ने गर्दछ । मैरै दुईजना पूर्खा राणाकालमा दशैं मान्दैनौ भन्दा भोजपुरमा राणाहरुले मृत्युदण्ड दिए । त्यति हुँदा पनि यो देश छाडेन मेरो पूर्खाले । मेरो पूर्खालाई दशैं नमान्दा राणाहरुले मृत्युदण्ड दिए भनेर कविता लेख्दा जातिवादीको आरोप लागाए मलाई । तामाङहरुको इतिहास त अत्यन्तै विद्रुप इतिहास हो र पनि तामाङहरुले यो देश छाडेन । मेरो पूर्खालाई यस्तो भयो भन्दा जातिवादी हुन्छ यहाँ । यो त इतिहास हो नि । यसलाई किन पचाउन सक्दैन यो देशले ? इतिहासलाई पुर्नलेखन गर्ने भनेको कसरी इतिहासलाई व्याख्या गर्ने भन्ने हो । थेबाले कवितामा भन्न खोजेको यो हो ।
पहिले पहिले कवि भावुक हुन्छ भन्थे । ओहो ! फलाना कवि कति भावुक छ भन्थे । अब हाम्रा कविहरुले भावुक भन्ने शब्दसँग प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । अब कवि कति चिन्तनशिल छ भएर कविता लेख्दो रहेछ भन्ने दिन आएको छ । भावुकताले त जमीन टेक्दैन, आकाशको कुरा गर्छ, स्वैरकल्पना गर्छ । चिन्तनले जमीनको कविता लेख्छ, समाजको कविता लेख्छ । मुक्तान थेबाको कविता चिन्तनले जन्माएको कविता हो । चिन्तनले जन्माएको कवितामा इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थराजनीति सबै सबै हुन्छ । त्यसैले मुक्तान थेबाको कविता साङ्गो पाङ्गो हेर्दाखेरि तामाङ समाजशास्त्रको कविता हो । तामाङ जातिको थोरबहुत समाजशास्त्र बुझ्ने हो भने अखण्ड आलाप पढ्दा हुन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म चल्दै आएको कुरा कवि र कविताको विपर्य सम्बन्ध छ । कविता बडो क्रान्तिकारी र वर्गसंघर्षको लेख्ने तर जीवन अर्कै हुन्छ । मुक्तान थेबामा पटक्कै छैन त्यस्तो । मुक्तान थेबाको कविता पढ्दा मलाई लाग्छ उसैको सदृष्र्य चित्र हेरिरहेको छु । उसले बाँचेको जीवन र उसको कवितामा विपर्य सम्बन्ध छैन, तादत्म्यता छ । लेखनसँग कविले आफ्नो जीवन पनि जोड्नु पर्छ यो थेबा र थेबाको कवितामा पाइन्छ ।
हामी वर्ग संघर्षको कुरा गर्छौ, क्रान्तिको कुरा गछौं । म पनि वैचारिक हिसावले वर्ग संघर्ष, क्रान्तिसँग नजिक भएँ । वर्ग संघर्षकै लागि, क्रान्तिकै लागि नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलनसँग जोडिन पुगेँ । तर, नेपालको वर्ग संघर्ष, क्रान्ति र आन्दोलन चाँही विशुद्ध वर्ष संघर्षसँग जोडेर मात्र सफल होला जस्तो लागेन । यहाँको ठूलो समस्या भनेको वर्णाश्रम व्यवस्था रहेछ । महिला मुक्तिका लागि वर्णाश्रम व्यवस्थामा धक्का नदिएसम्म सम्भन नहुने रहेछ । एउटी सर्वहारा बाहुन महिला र एउटी दलित सर्वहारा महिलामा कहाँ समानता छ ? सर्वहारा बाहुन र सर्वहारा दलित एउटै हुन् ? करोडपति बाहुन र करोडपति दमाई एउटै हुन् ? सर्वहारा त सबै सर्वहारा नै हुन् । त्यसैले दलितहरुको सवाल पनि त्यही हो । आदिवासी जनजातिहरुको सवालमा पनि त्यही हो । वर्णाश्रम व्यवस्थाको साङ्लो नचुडेसम्म सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व सम्भव छैन नेपालमा । दक्षिण एशियाकै समस्या भनेको वर्णाश्रम व्यवस्था रहेछ । वर्णाश्रम व्यवस्थामाथि विजय हासिल नगरेसम्म कम्यूनिष्ट आन्दोलन सफल नहुने रहेछ । संसारकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने जहाँ जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था छैन त्यहाँ त्यहाँ कम्यूनिष्ट आन्दोलन सफल भएको छ । वर्णाश्रम व्यवस्था नेपालको डरलाग्दो समस्या हो भन्ने लाग्छ मलाई । मुक्तान थेबाले आफ्नो कवितामा धेरै ठाउँमा वर्णाश्रम व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ, प्रश्न चिन्ह खडा गरेको ।
थेबाका कविताहरुमा कमजोरी छैन भनेको होइन छन् । पाब्लो, ब्रेख्त लगायतले कसरी लेखे भनेर पढ्ने हो तर हामीले हाम्रो कवितामा हाम्रो समाजलाई कसरी मुखर गर्ने भन्ने चाँही मुख्य कुरा हो । कवितामा शिल्प अनि भाषामा कमजोरीहरु छन् नै । यति हुँदा हुँदै पनि मुक्तान थेबामा कविताहरु पढ्न र मनन गर्न योग्य छन् । आउँदा दिनहरुमा थेबाले अझ राम्रा कविता लेख्न सकून शुभकामना ।
(‘अखण्ड आलाप’ विमोचनको क्रममा कवि राईले व्यक्त गर्नुभएकाे मन्तव्यको आधारमा तयार गरिएको ।)